10 मुद्रा बचत लागि सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग को - समाचार नियम
10 मुद्रा बचत लागि सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग को
किनमेल वाउचर गर्न होटल कोठा मा छूट र विमान टिकट देखि, बुकिंग शुल्क बिना विद्यार्थी सम्झौता र GIG टिकट
शीर्षक यो लेख “10 पैसा बचत लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोगहरूको” स्टुअर्ट Dredge द्वारा लेखिएको थियो, शुक्रवार 5th फरवरी मा theguardian.com लागि 2016 09.00 UTC
सबै austerity को उमेर असिना. भने पनि कि महंगा उपकरणहरू गर्न विस्तार गर्दैन हामी हाम्रो pockets मा ले. तर स्मार्टफोन तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले तिनीहरूलाई गरौं भने.
भोजन को मूल्यहरु को तुलना अनुप्रयोग, विमान टिकट, बीमा र थप राम्रो अब अनुप्रयोग स्टोर मा स्थापित छन्, रूपमा केही पाउण्ड बचत बढी विशिष्ट तरिका संग अनुप्रयोगहरू छन्.
यहाँ छन् 10 महिनाको अन्त्यमा एक सानो fatter महसुस आफ्नो वालेटमा छोड्न मदत गर्नुपर्छ अनुप्रयोगहरू.
होटल आज राती
होटल आज राती.
बारम्बार यात्री को बढ्दो संख्या आफ्नो होटल बुक गर्न र पछि पछि छोडेर छन् - वास्तवमा, दिन तिनीहरूले शहर आइपुग्दा. होटल आज राती यो व्यवहार spurring एउटा अनुप्रयोग हो: अन्तिम मिनेट कोठा बुकिङ लागि बातचीत छूट. तपाईं पर्याप्त बोल्ड हुनुहुन्छ भने, तपाईं झोला सक्छन् केही राम्रो सम्झौता.
ब्रिटिश अनुप्रयोग पासा आगामी संगीत संगीत ब्राउज र टिकट किन्न एक तरिका हो, जो आफ्नो स्मार्टफोन मा सम्पूर्ण भण्डारण छन्. यो हरेक GIG कवर गर्दैन, बरु एक चयन यसको सम्पादकीय टोली रोजेका, माथि-र-आ बैंड को एक पाहुना सहित. पैसा बचत पक्ष: तपाईं सबै कुनै बुकिंग शुल्क तिर्न.
Skyscanner उडान मूल्य तुलना लागि सबैभन्दा स्थापित अनुप्रयोग हो: आफ्नो वांछित गन्तव्य मा ट्याप गर्नुहोस् र कसले सस्ता टिकट छ हेर्न छिटो तरिका. अनुप्रयोग त्यसपछि आफ्नो उडानहरू बुक गर्न सान्दर्भिक साइटमा तपाईं निर्देशन, आपूर्ति सरल, सबैभन्दा सान्दर्भिक विकल्प यसलाई तल फोडा गर्न प्रभावकारी फिल्टर.
यो अनुप्रयोग खाद्य लागि एक छ, भन्दा बढी कवर 7,000 बेलायत वरिपरि रेस्टुरेन्ट जस्तै पिज्जा एक्सप्रेस र Zizzi चेन सहित. यो छूट र पदोन्नति संग मिति सम्म तपाईं राख्छ, साथै तपाईं आफ्नो वर्तमान स्थान निकटतम छन् जो रेस्टुरेन्ट हेर्न मदत रूपमा, र अनुप्रयोगबाट एउटा टेबल बुक.
बेलायत मा मात्र विद्यार्थीले यो अनुप्रयोग डाउनलोड आवश्यक, जो विद्यार्थी संघ NUS द्वारा तय विभिन्न छूट समुच्चय. यो पनि स्थान आधारित सुविधाहरू छ, नक्सा संग नजिकका प्रस्ताव देखाउन. यसको खोज सुविधा पनि सजिला छ, तपाईं भन्दा बढी मार्फत आफ्नो बाटो पत्ता लगाउन सहयोग 150 साझेदार 'छूट.
mySupermarket धेरै छूट प्राप्त गर्न एक तरिका रूपमा सपिङ्ग-सूची अनुप्रयोग हो: तपाईं उत्पादनहरु थप गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं हप्ता भर किन्न आवश्यक, तपाईं aisles मार्फत हिंड्दा त तिनीहरूलाई बन्द टिकटिक. तर अनुप्रयोग पनि विभिन्न बेलायत सुपरमार्केट मा मूल्यहरु नजर राख्छ, तपाईं मूल्यहरु तुलना र तिनीहरूले प्रत्यक्ष जाने नयाँ सम्झौता हेर्न मदत.
Uber जस्तै टैक्सी-hailing अनुप्रयोगहरूले पैसा बचत नगर्नुहोस्? कहिलेकाहीं, को बदनाम "वृद्धि" मूल्य निर्धारण प्रभाव छ छैन हुनत जब. Minicabit एक अलग दृष्टिकोण लिन्छ: यो बेलायत मार्फत ट्याक्सी र मिनी-टैक्सी कम्पनीहरु लागि एक तुलना अनुप्रयोगको, आफ्नो यात्राको विवरण मा ट्याप गर्नुहोस् तपाईं प्राप्त गर्न, त्यसपछि विभिन्न स्थानीय कम्पनीहरु देखि उद्धरण ब्राउज. यो हाल काम 40 बेलायत शहर.
पनि आफ्नो बिजुली र ग्याँस बिल मा एक विस्तृत समझ राख्न व्यस्त? क्लब सामेल. मीटर अध्ययनहरू ठीक कि लागि एक अत्यन्तै उपयोगी उपकरण हो, राम्रो रेखांकन प्रशस्त तपाईंको उपयोग र लागत ट्र्याक संग. तर यो मूल्य तुलना सुविधाहरू भनेर पैसा बचत छ: दृष्टि मा एक salesperson बिना आफ्नो क्षेत्रमा अन्य प्रदायकको लागत जाँच.
कम्प्युटर बरु स्मार्टफोन भन्दा कार बीमा मूल्यहरु अनुसन्धान गर्न उपयुक्त बाटो हुन सक्छ. MoneySuperMarket गरेको MoreMoney अनुप्रयोग हुनत मोबाइल जान केही थप मान्छे लोभ्याउन आशा छ: यसलाई छिटो छ, कार र घर बीमा लागि अनुमान प्राप्त गर्न सरल तरिका, अन्य वित्तीय सेवाहरू बीचमा.
अनुप्रयोगलाई स्टोर मा एक बिरालो Swing, र तपाईं एक दर्जन पैसा बचत भौचर अनुप्रयोगहरू मारा छौँ: Wowcher, HotUKDeals, Vouchercloud र अरूलाई सबै लायक सम्झौता शिकारी लागि एक नजर हो. VoucherCodes सबैभन्दा व्यापक मध्ये एक छ, किनमेल को एक मिश्रण संग, खाने र यात्रा छूट, सुविधाहरू स्थानीय सम्झौता ठाँउ साथै.
के हामी छुटेका छन्? तपाईंले माथि दिइएका अनुप्रयोगहरू आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न लागि टिप्पणी खण्ड खुला, र पैसा बचत अनुप्रयोगहरू लागि सिफारिसहरू हामी समावेश छैन भनेर.
← Fentanyl: औषधि 50 समय लागु पदार्थ भन्दा ज्यादा पोटेंट एप्पल iPhone 'त्रुटि भन्छन् 53′ ग्राहक सुरक्षित छ’ सुरक्षा →